Khusela iMacBook Pro yakho entsha ukusuka ngo-2017 ngalo mkhono ukhuselayo | Ndisuka mac
Kwiveki nje edlulileyo, sifunde ukuba iApple ihlaziya umgca opheleleyo weelaptops kuluhlu these Pro, ukubenza babe namandla ngakumbi esandleni seeprosesa ezintsha. Ngesi sizathu sicinga ukuba ukusukela ngoku ukuthengisa olu hlobo lweelaptop luya kukhula ngakumbi kwaye ngalo abasebenzisi baya kufana nokuphambana befuna iindlela zokhuselo.
Ngesi sizathu, siphinde sakubonisa ukhetho olutsha kolu hlobo lwekhompyuter ngexabiso elifanelekileyo. Yifomathi yangaphakathi efakwe ngaphakathi eya kuthi ikuvumela ukuba uhambise iMacBook Pro yakho ngokukhuselekileyo.
Ukuba ufuna ukugcina ilaptop yakho entsha kude namaqhuma anokubakho kunye nokukrwela, sikucebisa ukuba uthathele ingqalelo ithuba lokuthenga ikhava enje ngale siyiveze kweli nqaku. Kwimarike kukho iindlela ezingapheliyo, kodwa kwiSoy de Mac Sijonge ezona zilungileyo kuthathelwa ingqalelo ixabiso lemali.
Njengoko ubona kwimifanekiso esiyincamathiseleyo kweli nqaku, ukhuselo esilucebisayo namhlanje olufumaneka ngemibala emine kwaye lwenziwe ngezinto ezisemgangathweni. Uyilo lwayo ngoku kwaye ngokubhekisele ekusebenzeni kwayo sinokukuxelela oko Ineepokotho ezininzi zangaphandle kunye nokugqitywa okuphezulu ngaphakathi.
Ityala livaliwe ngesiphatho esomeleleyo nesifihliweyo esenza ukuba xa uvula okanye uvale awukwazi ukukrwela umzimba weMacbook ngayo. Ixabiso layo, ye-13 intshi iMacBook Pro Ngu-18,10 euro, kodwa ungakhetha ezinye i-diagonals ngamaxabiso afanayo. Ngokuqinisekileyo ukhetho lokujonga ukuba sele unayo ilaptop ye-Apple okanye ukuba ucinga ukuthenga enye yeefayile ze- Iinkonzo ezintsha zeMacBook ezivela kwi2017.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Khusela i-2017 MacBook Pro yakho entsha ngalo mkhono ukhuselayo
Nyanzela ukuyeka iZicelo kwiMacOS Sierra